Xiaomi launched Mi Power Bank 2i in Nepal-TechPana Tech News Nepal
सोमबार, श्रावण २६, २०७७ १७:३७
निधनपछि कसले चलाउला तपाईंको फेसबुक ?
पासवर्ड बिर्सिने बानी छ ? यसो गर्नुहोस्
वायरलेस इयरफोन भएको मास्क, यस्ता छन् अरु फिचर
नोकिया ८.३ फाइभजी सार्वजनिक, प्रिबुकिङ गर्नेलाई गुगल वानमा
स्मार्टफोन किन्दा ध्यान दिनैपर्ने यी ७ कुरा
साओमीका १० हजार र २० हजार एमएएच क्षमताका पावर बैंक नेपालमा, यस्तो छ मूल्य
काठमाडौं । साओमीले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफाेन रेड्मी नोट नाइन प्रो म्याक्सका साथै पावर बैंक समेत सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एकैपटक १० हजार एमएएच र २० हजार एमएएच क्षमताको मी पावर बैंक टू आई सार्वजनिक गरेको हो ।
एलिगेन्ट डबल एनोडाइज्ड एल्युमुनियक डिजाइनका साथ आएको १० हजार एमएएच क्षमताको मी पावर बैंक टू आई हलुका छ । ४.२ एमएम मोटाइ रहेको यो पावर बैंकमार्फत तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनलाई थुप्रै पटकसम्म चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ । यसको बजार मूल्य १८ सय ९९ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै कम्पनीले पोलिकार्बोनेट केसका साथ एक्स्ट्रा ग्रिप भएको २० हजार एमएएच क्षमताको मी पावर बैंक टू आई पनि बजारमा ल्याएको छ । यसको बजार मूल्य ३ हजार १९९ रुपैयाँ राखिएको छ ।
यी दुवै पावर बैंकमा लिथियम पोलिमर ब्याट्री र डुअल यूएसबी आउटपुट डिभाइस राखिएको छ । जसले गर्दा एकसाथ दुईवटा उपकरण चार्ज गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै मी पावर बैंक टू आईमा नवौं तहको विश्वस्तरीय सर्किट चिप प्रोटेक्सन समावेश गरिएकाे छ । साथै यसमा टेक्सास इन्स्टुमेन्टद्वारा निर्मित यूएसबी स्मार्ट कन्ट्रोल चिप र चार्जिङ डिस्चार्जिङ चिप छ ।
सुरक्षालाई ध्यान दिँदै यसमा चार्जिङ कन्भर्जन रेटलाई समेत सुधार गरिएको छ । जसले डिस्चार्जिङ भोल्टेजलाई स्थिर बनाउने कम्पनीले जनाएको छ।
कुन स्मार्टफोनमा कहिले उपलब्ध हुने छ एन्ड्रोइड इलाभेन ?
काठमाडौं । मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड इलाभेन सार्वजनिक भइसकेको छ । यो अवधिमा गुगल पिक्सेल,
काठमाडौं । ओप्पोले असोज ११ गते आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ओप्पो एफ१७ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक
फोल्डेबल स्मार्टफोन ल्याउँदै कम्प्युटर निर्माता एचपी
काठमाडौं । अमेरिकी ल्यापटप तथा कम्प्युटर निर्माता कम्पनी एचपी (ह्याभलेट प्याकर्ड) ले स्मार्टफोन ल्याउने तयारी
सामसङ ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी एफई सार्वजनिक, यस्तो छ मुल्य र फिचर
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङले नयाँ ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी फ्यान एडिसन सार्वजनिक गरेको छ
गुगल म्यापमा अब कोभिड प्रभावित ठाउँको अपडेट
ह्वावे कनेक्ट २०२० सुरू: डिजिटल रूपान्तरणका पाँच रणनीति सार्वजनिक
ईकर्मकाण्डः हिन्दु परम्पराका सबै कर्मकाण्डको अनलाइन सेवा